QT Creator - Qt တီထွင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံး platform-IDE ။ | Linux မှ
QT Creator: Qt တီထွင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံး platform-IDE ။
Qt Creator - Qt တီထွင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံး platform-IDE ။
ဒါအများကြီး Windows ကိုကဲ့သို့ MacOS o GNU / Linux များ များစွာရှိပါသည် ဘက်ပေါင်းစုံပရိုဂရမ်ပတ်ဝန်းကျင် (Integrated Development Environment / IDE)၊ developer များ သို့သော်၎င်းတို့၏ application များနှင့်စနစ်များကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်အနည်းငယ်သည်အခမဲ့နှင့် / သို့မဟုတ်ပွင့်လင်းပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်ပုံစံမျိုးစုံဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် Qt ဖန်ဆင်းရှင် ၎င်းသည်အနည်းငယ်တည်ရှိမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် Qt ဖန်ဆင်းရှင် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် Cross-platform IDE ကို အထူးဒီဇိုင်းထုတ်သည် Qt application developer များလွယ်ကူသောသင်ကြားမှုနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက်ဤဘာသာစကားတွင်အထူးအင်္ဂါရပ်များပံ့ပိုးပေးခြင်းကိုအာရုံစိုက်သည်။
ကိုးကား တရားဝင်ဝီကီ ဒီ Qt ဖွံ့ဖြိုးရေးနည်းပညာ ၎င်းကိုဖော်ပြထားသည် -
"Qt developer များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးမည့် cross-platform IDE (ပေါင်းစပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပတ်ဝန်းကျင်) ။ ဒီဟာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါ Qt စီမံကိန်း။ ၎င်းသည် Qt အသုံးပြုသူအသစ်များကိုလျင်မြန်စွာသင်ယူနိုင်ရန်နှင့်လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်ကူညီပေးသည့်စွမ်းဆောင်ရည်များကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးအတွေ့အကြုံရှိသော Qt developer များ၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုလည်းတိုးမြှင့်ပေးသည်".
C + အတွက်အထောက်အပံ့ဖြင့်ကုဒ်တည်းဖြတ်သူ, QML နှင့် ECMAscript
အမြန်ကုဒ်အညွှန်းအတွက် tools များ
syntax မီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ပြီးစီး code
သင်ရိုက်သည့်အခါ code နှင့် style ကိုတည်ငြိမ်သောထိန်းချုပ်မှု
ကုဒ် refactoring များအတွက်ပံ့ပိုးမှု
ကိုက်ညီမှုကွင်းနှင့်ရွေးချယ်ရေး mode ကို
1 Qt Creator - Cross-platform IDE ကို install လုပ်ခြင်း
1.1 Terminal တပ်ဆင်ခြင်း (CLI)
1.2 ဂရပ်ဖစ်တပ်ဆင်မှု (GUI)
1.2.1 A.- အဆင့် 1
1.2.2 ခ - အဆင့် ၂
1.2.3 C.- အဆင့် 3
1.2.4 D.- အဆင့် ၄
Qt Creator - Cross-platform IDE ကို install လုပ်ခြင်း
အများအပြား၌ အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း operating system များကဲ့သို့ GNU / Linux များသင်၏လက်ရှိ Distros များတွင်သင်၏စက်မှတိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းနိုင်သည် ကိုယ်ပိုင်သိုလှောင်ရုံ, ဒါပေမယ့်သေချာပေါက်အရှိဆုံးခေတ်မီမဟုတ်သောဗားရှင်း၌၎င်း, ဖြစ်ကောင်းအများအပြားကိစ္စများတွင်ပင်မဟုတ်ဘဲ နောက်ဆုံးပေါ်တည်ငြိမ်စီးရီးအကြောင်း, စီးရီးဖြစ်ပါတယ် QT5ဒါပေမယ့် Qt4.
Terminal တပ်ဆင်ခြင်း (CLI)
ထိုကဲ့သို့သောခေါ်ဆိုမှုအဖြစ်ယခင်ပို့စ်များတွင်DEBIAN 10 တွင် Software Development အတွက် Packages»ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားဆက်စပ်ကိရိယာများနှင့်အတူ၊ အောက်ပါ command ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၊ အောက်ပါနည်းလမ်းဖြင့်တပ်ဆင်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မှတ်ချက်ပြုသည်။
သို့သော်၌တည်၏ သင်၏တရားဝင်ဝီကီ၏တပ်ဆင်ခြင်းအပိုင်းအမျိုးမျိုးသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ၎င်းကိုမတူညီသောနည်းများဖြင့်ထည့်သွင်းနိုင်သည် terminal (console) ကြောင်းပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ် GNU / Linux Distro အသုံးပြုခံ့။
ဤအတောအတွင်းပိုမိုရိုးရှင်းသောအကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက်၊ ဂရပ်ဖစ်တပ်ဆင် အောက်ပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်:
မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဝင်ရောက်ပါ Qt ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်။
တရား ၀ င် Qt ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ download ကဏ္yourမှသင်ရွေးချယ်လိုသောဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်ရယူပါ တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းအသစ် မင်္ဂလာပါ တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းအဟောင်း.
installer ကို run ပြီး Qt Creator ကို install လုပ်ပါ။
Qt Creator ကိုဖွင့်ပါ၊ သင်အဆင်ပြေစွာအသုံးပြုပါ။
အပေါ်ပိုမိုယေဘုယျသတင်းအချက်အလက်များသည် Qt ဖန်ဆင်းရှင် နှင့် Qt နည်းပညာ သင်နှင့်သက်ဆိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏စာပမြေားအဟောင်းများကိုရယူနိုင်သည်။
IDE Qt Creator 4.10.0 ဗားရှင်းအသစ်ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်
Qt Marketplace, Qt အတွက်မော်ဂျူးများနှင့်ပလပ်ဂင်များ၏ catalog store
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် Cross-platform IDE «Qt Creator»တစ် ဦး အဖြစ်စဉ်းစားမိတယ် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် IDE ကို လွယ်ကူသောသင်ယူလေ့လာနိုင်ရန်နှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်ဤဘာသာစကားတွင်အထူးအင်္ဂါရပ်များပံ့ပိုးပေးရန်အာရုံစိုက်သောကြောင့် Qt application များ၏ developer များအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အများကြီး အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုတစ်ဖွဲ့လုံးအတွက် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » QT Creator: Qt တီထွင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံး platform-IDE ။
ဒါကကြီးမားတဲ့အယ်ဒီတာပါ။ ကျွန်တော်တော်တော်များများကိုပရောဂျက်တွေမှာသုံးပြီးအဲဒါဟာပြီးပြည့်စုံပါတယ်။ မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Juan! မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သင်၏ IDE နှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံသည်အပြုသဘောဆောင်သောကြောင့်၎င်းသည်အခြားသူများအားထောက်ခံချက်ပေးသောကြောင့်သူတို့အသုံးပြုရန်လှုံ့ဆော်ခံရသည်ကအလွန်ကောင်းသည်။
AWF နှင့် SaaS အကြားအချက်အလက်လွှဲပြောင်းခြင်းကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသောဝန်ဆောင်မှုအသစ် AppFlow